ဆေးလိပ်မဖြတ်နိုင်ဘူးလား - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home 365 Online Shopping Ads ဆေးလိပ်မဖြတ်နိုင်ဘူးလား
Maung Pauk at 7:40:00 AM 365 Online Shopping, Ads,
ဆေးလိပ် နဲ့ ဆေးရွက်ကြီးဟာ လူကို ဘယ်လောက် ဒုက္ခပေးမှန်း သိကြပေမယ့် မဖြတ်နိုင်ကြဘူးလေ.. ဆေးလိပ်ဘူးတွေမှာ ပါးစပ်ကင်ဆာပုံကြီး ပြူးပြူးကြီး ထည့်ပေးထားတာတောင် ဒီဆေးလိပ်ဘူးက ရုပ်ဆိုးတယ်ကွာ လို့ပဲပြောပြီး ဆေးလိပ်ဆက်သောက်နေကြတာပဲမဟုတ်လား..
ဆေးလိပ်အမှန်တကယ်ဖြတ်ဖို့ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ပါပဲ.. လူတွေက ရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုကို ဘယ်လောက်ပင်ပန်းခက်ခဲပါစေ. ဖြတ်ကျော်နိုင်ကြပေမယ့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ကြိုးစားသူတွေ နည်းပါတယ်...
ဆေးလိပ်လည်းဖြတ်ချင်တယ်၊ ဖြတ်လည်းမဖြတ်နိုင်ဘူး ဆိုသူတွေအတွက် ခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ E-cigarette တွေရှိပါတယ်...
E-cigarette သောက်ခြင်းကြောင့် လက်နှင့်ခံတွင်း အနံဆိုးများကိုလဲ လုံးဝမရှိစေတဲ့ အပြင် ပုံမှန်ဆေးလိပ်တွင်ပါဝင်တဲ့ အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ နီကိုတင်း ဆေးလိပ်ဂျိုးများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပါဝင်သဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။
မီးခိုးငွေ့မထွက်ဘဲ ရေငွေ့အဖြစ်နဲ့သာ လေထုထဲ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အပြင် သာမန်ဆေးလိပ်တွေလို အနံ့ လည်းမရှိ အန္တရယ်ပေးတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာစေမှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။
ဘယ်လို E-cigarette ကိုရွေးချယ်မလဲ...
ခုဖေါ်ပြပေးလိုက်တဲ့ E-cigarette ကတော့ အရောင် လုံးဝ မကျွတ်၊ အရည် လုံးဝမစိမ့် တဲ့ဆေးတံ၊ အငွေ့ အထူးပိုစေသော မီးတောက်စလှပသေသပ်ပီး ဒီဇိုင်းပုံစံ အဆင့်မြင့် Quality E-cigarette အသစ် ဖြစ်ပါတယ်...
သာမန်ဆေးလိပ်သောက်သကဲ့သို့ မီးညှိစရာမလိုပဲ battery အားသွင်းရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင် သလို တစ်ကြိမ်အားသွင်းထားရုံဖြင့် နှစ်ရက်ထိ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ E-cigarette ပါ.. ဆေးရည်တစ်ဘူးလျှင် ဆေးလိပ် ၅ ဘူးစာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
ဈေးနှုန်းက 23000/- ကျပ် ဖြစ်ပြီး 365 Online Shop
ph 09451689031, 09787179972 ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်...
ဆေးလိပျ နဲ့ ဆေးရှကျကွီးဟာ လူကို ဘယျလောကျ ဒုက်ခပေးမှနျး သိကွပမေယျ့ မဖွတျနိုငျကွဘူးလေ.. ဆေးလိပျဘူးတှမှော ပါးစပျကငျဆာပုံကွီး ပွူးပွူးကွီး ထညျ့ပေးထားတာတောငျ ဒီဆေးလိပျဘူးက ရုပျဆိုးတယျကှာ လို့ပဲပွောပွီး ဆေးလိပျဆကျသောကျနကွေတာပဲမဟုတျလား..
ဆေးလိပျအမှနျတကယျဖွတျဖို့ကတော့ ကိုယျ့စိတျပါပဲ.. လူတှကေ ရညျမှနျးခကျြတဈခုခုကို ဘယျလောကျပငျပနျးခကျခဲပါစေ. ဖွတျကြျောနိုငျကွပမေယျ့ ဆေးလိပျဖွတျဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ်စကတော့ ကွိုးစားသူတှေ နညျးပါတယျ...
ဆေးလိပျလညျးဖွတျခငျြတယျ၊ ဖွတျလညျးမဖွတျနိုငျဘူး ဆိုသူတှအေတှကျ ခတျေမီဆနျးပွားတဲ့ E-cigarette တှရှေိပါတယျ...
E-cigarette သောကျခွငျးကွောငျ့ လကျနှငျ့ခံတှငျး အနံဆိုးမြားကိုလဲ လုံးဝမရှိစတေဲ့ အပွငျ ပုံမှနျဆေးလိပျတှငျပါဝငျတဲ့ အဆုတျကို ထိခိုကျစတေဲ့ နီကိုတငျး ဆေးလိပျဂြိုးမြား လုံးဝ (လုံးဝ) မပါဝငျသဖွငျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုပွီးသငျ့တျောပါတယျ။
မီးခိုးငှမေ့ထှကျဘဲ ရငှေအေ့ဖွဈနဲ့သာ လထေုထဲ ပြောကျကှယျသှားတဲ့အပွငျ သာမနျဆေးလိပျတှလေို အနံ့ လညျးမရှိ အန်တရယျပေးတဲ့ ဓါတုပစ်စညျးတှလေညျး ထှကျပျေါလာစမှော မဟုတျလို့ပါပဲ။
ဘယျလို E-cigarette ကိုရှေးခယျြမလဲ...
ခုဖျေါပွပေးလိုကျတဲ့ E-cigarette ကတော့ အရောငျ လုံးဝ မကြှတျ၊ အရညျ လုံးဝမစိမျ့ တဲ့ဆေးတံ၊ အငှေ့ အထူးပိုစသေော မီးတောကျစလှပသသေပျပီး ဒီဇိုငျးပုံစံ အဆငျ့မွငျ့ Quality E-cigarette အသဈ ဖွဈပါတယျ...
သာမနျဆေးလိပျသောကျသကဲ့သို့ မီးညှိစရာမလိုပဲ battery အားသှငျးရုံဖွငျ့လှယျကူစှာ အသုံးပွုနိုငျ သလို တဈကွိမျအားသှငျးထားရုံဖွငျ့ နှဈရကျထိ အသုံးပွုနိုငျတဲ့အတှကျလှယျကူရိုးရှငျးတဲ့ E-cigarette ပါ.. ဆေးရညျတဈဘူးလြှငျ ဆေးလိပျ ၅ ဘူးစာအသုံးပွုနိုငျပါတယျ...
စြေးနှုနျးက 23000/- ကပျြ ဖွဈပွီး 365 Online Shop
ph 09451689031, 09787179972 ကိုဆကျသှယျဝယျယူနိုငျပါတယျ...
Android Nougat 7.0 ထိ Root တစ်ချက်တည်း ပေါက်နိုင်တဲ့ Rootkhp v1.6
Blog Archive October (5) September (12) August (20) July (42) June (41) May (23) April (20) March (22) February (23) January (28) December (21) November (57) October (59) September (72) August (111) July (181) June (146) May (136) April (289) March (234) February (227) January (154) December (90) November (107) October (105) September (90) August (146) July (119) June (96) May (158) April (89) March (114) February (193) January (156) December (154) November (133) October (87) September (57) August (78) July (73) June (61) May (48) April (49) March (78) February (292) January (130) December (124) November (117) October (153) September (240) August (178) July (154) June (136) May (141) April (112) March (97) February (149) January (93) December (39) November (11) October (46) September (13) August (4) May (2) April (3)